Indoda yeSagittarius - Sagittarius
Ulwazi ngeSagittarius Man x
Xa indoda yeSagittarius ithandana, akukho nto intsha. ILanga lakhe likuphawu olulawulwa nguJupiter kwaye oku kumenza athambekele ekuthandeni ngokukhawuleza, enze njengomnqobi omele azuze iintliziyo zabaninzi. Ngokubanzi, kuhle ukuyigcina le ndoda ikude kangangexesha elithile, de iinjongo zayo zicace kwaye iimvakalelo zakhe zizinzile. Nangona uya konwabela ukuzenzela kunye nokuthandana okuqala ngokuthandabuza, uya kuba nethuba lokuzinzisa iimvakalelo zakhe kuphela xa enento yokulwela. Ungowelungu loMlilo emva kwayo yonke into, kwaye kusoloko kubalulekile ukuba asebenze kwaye acele umngeni kwinkanuko yakhe, kwindlela yakhe yokuphumelela intliziyo yomntu.
Ukwabelana ngesondo nomntu weSagittarius ngokuqhelekileyo kumnandi. Akakhathazwa kukungazithembi okuqhelekileyo kwaye, njengakuyo yonke into ebomini ufuna ukuba nexesha elimnandi kubudlelwane bakhe bezesondo. Uyakwazi ukuziphatha kakubi kwaye atshintshe amaqabane amaninzi ngesondo, kodwa oku kunokumenza umthandi obalaseleyo oyiqondayo indlela yokwanelisa iqabane lakhe. Njengendoda elawulwa nguJupiter, ithanda yonke into ngobuninzi, isini kakhulu. Sekunjalo, olu hlobo lulawulwa nguJupiter luthetha ngekholwa. Ukuba ubeka ukholo lwakhe kuthando olunye lokwenyani, amathuba okuba uya kuhlala kubudlelwane bakhe, ngamanye amaxesha ngaphandle kolweyiseko. Ukuba wenza njalo, oku kuya kumnika ubunzulu beemvakalelo ngokwaneleyo ukuba abe luthando lokwenene lomntu.
Akazinzanga nje. Kungacaphukisa ukuthetha ukuba indoda yeSagittarius ayithembekanga, kodwa le yeyona nto isondeleyo kwinyani xa ifika kubudlelwane bakhe. Usenokuthenjwa ngokugqibeleleyo yonke imihla, kodwa ngubani onokuthi iimvakalelo zakhe ziya kukhula njani ngomso okanye kwiiyure nje ezimbalwa? Sagittarius luphawu oluguquguqukayo, kwaye into yoMlilo inika le ndoda isantya esaneleyo kwiinguqu zayo ebonakala inzima ukuyiqulatha. Sekunjalo, xa ezifumanisa ebudlelwaneni kunye neqabane elinokulandela isantya sakhe, kukho ithuba elikhulu lokuba uya kuzibophelela, athembeke kwaye azinze ngokungaqhelekanga. Eyona nto ibalulekileyo ekufuneka ayifumene kubudlelwane bakhe yinjongo kunye novakalelo lwekamva elinentsingiselo.
Ngaba unokumthemba wakhoSagittarius indoda
Ngokubanzi, le yindoda engaxoki kakuhle. Yiloo nto engafane akhethe ukwenjenjalo, naxa engathembekanga okanye ethanda omnye umntu. Sisenokuthi unokuthenjwa xa kufikelelwa kwizinto azithethayo, kodwa akanakuthenjwa ngokwenene xa kufikelelwa kuzinzo lomsa wakhe weemvakalelo. Kwakhona uyindoda eya kunikezela ngokulula kuzo zonke iintlobo zeenkohliso kunye neengcamango, kwaye oku kunokumenza angathembeki, kungekhona ngenxa yokuba exoke kuwe, kodwa ngenxa yokuba uxoke kuye kwaye ubona ihlabathi nge-pink goggles.
Ukuthandana nendoda yeSagittarius kunokuba mnandi kakhulu. Uncumo lwakhe olukhulu luya kwenza kube nzima ukuba uthi hayi kuzo naziphi na iimbono zakhe ezintsha kunye nemisebenzi ayicebisayo. Ngamanye amaxesha ukholo lwakhe oluhlekisayo kwiziphumo zethamsanqa lunokumenza ukuba akhethe izinto ezigqithisileyo okanye eziyingozi, kwaye ufuna iqabane eliphambene ngokwaneleyo ukuba lilandele, kodwa libe nengqondo ngokwaneleyo ukuba limnqande xa kuyimfuneko. Oku akuthethi ukuba ufuna ulawulo, kodwa ngakumbi ingqondo enengqondo ukumnceda enze ukhetho olufanelekileyo. Imihla kunye naye ayinakuze ibe yinto ekruqulayo, kwaye nangona uya kufuna ukuya kwiimuvi kwaye abe nesidlo sakusihlwa esimnandi, izinto ezilula ezifana nezi aziyi kuyanelisa imfuno yakhe ye-adventure. Ukuba iimali zakhe ziyakuvumela, kunokwenzeka ukuba sele kumhla wakho wesibini ungaphela naye kwinqwelomoya yejethi ukuya kwindawo ekude.
Amadoda e-Sagittarius ahlala eqondwa ngokungafanelekanga ukuba angaphezulu kwaye angabantwana. Nabani na onqwenela ukwenza ubudlelwane obusemgangathweni kunye nale ndoda kufuneka aqonde ukuba uphawu lweSagittarius luqhubelwano lweScorpio ngelixa lwandulela iCapricorn, ngoko ke akukho nto inqabileyo malunga nayo. Le yindoda efuna inyaniso kwaye ayiyi kuphumla ide iyifumane. Oku akuthethi nje ukuba ufuna ukunyaniseka kumaqabane akhe, kodwa iimvakalelo zakhe zangaphakathi ezinyanisekileyo. Amaxesha amaninzi akasazi nokuba kutheni engafuni ukuhlala kubudlelwane obufanayo, okanye kutheni efuna olo tshintsho lukhulu kunye nohambo. Oku akuvimbeli nabani na okufutshane naye ukuba aqonde ukuba oku kungenxa yokukhangela kwakhe lowo, ulwalathiso lokwenyani. Ufuna ukufumana indawo yokudibanisa ngokupheleleyo kunye nenyaniso, kwaye kuphela xa eyifumana kumntu omnye, uya kuhlala ethembekile kwaye ezinikele kubo.
Indoda yeSagittariusUkuthandwa nokungathandwa
Akathembekanga, ungumntwana, ngokulula ulahlekelwa ingqwalasela kwaye ngamanye amaxesha unokutyhalela, kunye nesidingo sokunyanzelisa izimvo kunye neenkolelo zakhe kwabanye. Kwelinye icala, unethemba, uzele lukholo kwikamva elingcono kwaye uzaliswe ngamandla okudala nantoni na ayicingayo, okanye ancede abo bamngqongileyo xa beswele.
Indlela yokukhetha isipho sakhoIndoda yeSagittarius
Akukho nto ilula njengokuthengela indoda yakho yeSagittarius itikiti lenqwelomoya. Nakweyiphi na indawo yokufikela. Uyakwaneliseka nangetikiti lebhasi, kodwa ukuba ufumana ithuba lokubhabha, umbulelo wakhe uya kuphindaphindeka kakhulu. Uthanda izinto ezinkulu nezinemibala, nangona umbona kuphela emnyama, beige kunye nengwevu. Unokuhlala ukhetha incwadi yeziqhulo, izinto ezihlekisayo ezithethwa ngabantwana, ifilosofi kunye nokukhangela inyaniso. Uyakuxabisa isipho esingenamsebenzi ukuba asinto yanto ngokwaneleyo, hamba nophawu lwetrafikhi kwindlu yakhe okanye into efanayo acinga ukuba akanakuze ayifumane.
Virgo I-Scorpio Gemini Khetha Uphawu I-Capricorn